GENEVA - Shir labo geesood ah, oo looga hadlay arrimaha dalka Soomaaliya iyo qaxootiga ayaa ka dhacay magaalada Geneva, ee xarunta dalka Switzerland.
Wafdi ka socda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, oo uu horkacayay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Axmed Ciise Cawad, ergayga UNHCR ee arrimaha qaxootiga Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey iyo madaxa hay'adda Filippo Grandi ayaa ka qeyb-galay kulanka.
Mas'uuliyiinta ayaa si gaar ah shirkooda diiradda ugu saarey qaxootiga Soomaaliya ee ku nool Yemen, Kenya iyo Libya, kuwaasoo UNHCR iyo dowladda Soomaaliya ka shaqeynayaan dib usoo celintooda.
Horey dowladda Federaalka, UNHCR iyo Kenya ayaa u galay heshiis dib usoo celinta qaxootiga Dhadhaab ku saabsan, kaasoo lagu celiyay kumanaan qoyska, oo la geeyay gobollada nabad ah, balse la dayacay.
Dhadhaab, oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn caalamka, kuna taalla waqooyiga bari ee Kenya ayaa waxaa ku nool dad Soomaali ah oo lagu qiyaasay 400,000 oo qof kuwaasoo intooda badan degan ku dhawaad 30 sano.
Kenya oo khafiifineysa ciqaabta qaxootiga ]Dhageyso]
Afrika 12.08.2018. 18:47
Boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah ayaa mudo dheer ku nool xeryaha Dhadhaab kuwaasi...
Dowlada oo shaacisay mowqifkeeda ilaalinta Kenya ee xeebaha Soomaaliya
Soomaliya 25.06.2019. 06:37